Ihe omuma DMARC
Y’oburu no n’ulo ahia ahia email, ipuru inu banyere DMARC. DMARC pụtara Nyocha Ozi nke ngalaba, Nkwupụta na ịrụ ọrụ. Maka ozi ndị ọzọ, m ga-akwadoro ya Agari saịtị na ha DMARC akwụkwọ na akụrụngwa na isiokwu.
Dị ka ndị ọkachamara na 250ok, onye nkwado email anyị, ebe a bụ uru nke DMARC:
Na-edozi ọrụ na nkọwa nke usoro nyocha emelitere amara nke SPF na DKIM.
Na-enyere gị aka na itinye n'ọrụ na itinye SPF na DKIM n'ofe akwụkwọ ozi gị niile n'atụghị ụjọ ịbute ụzọ anapụta.
Ntuzi ISP na ngalaba nkeonwe na ichedo ndị ọrụ site na ndị na-ezipụ ndị ọrụ na-ejighi ikike na aghụghọ iji akara na ọdịnaya gị.
Na - eme ka ndị nnabata n’uwa niile wepụta ọkwa ụlọ ọrụ (ma ọ bụ nke onwe gị na nke anya gị naanị!)
250ok agbakwunyela DMARC Dashboard na Informant ha, bụ ngwa dị mfe iji rụọ ọrụ iji nyere gị aka igosipụta ihe ndekọ SPF na DKIM yana inyere gị aka ịme mgbanwe dị mma na DMARC.
Anyị kwadoro ma mepụta ihe ngosi a iji nyere ndị na-ere ahịa email aka ịghọta nke ọma ma nsogbu ahụ yana uru ọ bara ịnabata nkọwapụta DMARC. Ekele dịrị ndị DMARC niile nyere aka kụziere anyị ma nye data ejiri na infographic ahụ!
Tags: 250okdkimDMARCnkọwa dmarcozi nnapụta emailozi phishingkedu ka DMARC si arụ ọrụspfkedu ihe bụ DMARC